Mogadishu Journal » Ra’iisul Wasaaraha oo ku guuleystay in heshiis laga gaaro colaado ka dhacay Galgaduud
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku guuleystay in dadaalada baadigoobka nabadeynta deegaanada Huurshe iyo Xeraale oo ay ku dagaalameen labo beelood oo walaalo ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa Goobjoog ka noqday saxiixa heshiis nabadeed oo ay gaareen bulshada ku nool deegaannada Xeraale iyo Huurshe ee gobalka Galguduud.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo u mahad celiyay dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay in lagu guuleysto dhammeynta colaadda dhiigga badan ku daatay iyo saxiixa heshiiska bogga iyo nolosha cusub abuuraya, ayaa bulshada Huurshe iyo Xeraalle kula dardaarmay in ay ilaaliyaan oo aan dib loogu laaban colaaddii, lagana barto casharro nololeed.
Heshiiska dhex maray bulshada Xeraale iyo Huurshe ayuu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay in uu taariikhda dalka baal dahab ah ka gelayo, waxaana bulshada Galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay uga daydaan geesinnimada lagu dhammeynayo colaadaha, deegaan kasta oo colaad ay ka jirto lasoo af-jaro, nabaddana la qaato si horumar loo gaaro.
Odayaasha labada dhinac ayaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uga mahad celiyey dadaalladiisii hagar la’aaneed oo ugu dambeyn sababay in reer Xeraale iyo Huurshe ay wada saxiixaan Heshiiska nabadeed oo bilaaw u ah nolol iyo iftiin cusub oo ay ku naaloodaan dad walaala ah oo ku kala irdhoobay colaadda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay qaadeynso dowrka uga aadan hir-gelinta qodobada heshiinska nabadeed ee wadajirka ay qalinka ugu duugeen reer Huurshe iyo reer Xeraale.
Al-Shabaab oo wadada u galay Kolonyo ciidanka dowladda oo marayay duleedka Afgooye